क्यान्सरलाई जितेकी मनीषा कोइरालाले दिइन् क्यान्सरबाट जोगिने यस्ता टिप्स – Wow Sansar
February 11, 2021 80
Prevभाइरल भएको यी तस्विरहरुले गहिरो सन्देश दिएको छ, यसको भिडियो त उपस्थित मानिसहरुलाई रुवाएको थियो
Next४ करोड मूल्यको दुर्लभ सुन्तला रंगको मोती भेट्टाएका गरिब माझी पक्राउ!
सौता बनेर आइन्, आफूभन्दा १५ बर्ष कान्छो छोरालाई नै आँखा लगाइन् अहिले भइन् गर्भवती
श्वेता र बिजेन्द्रबिचको यस्तो हर्कत गरेको टिकटक भाइरल (6886)
एकाबिहानै आयो खुसीको खबर ! सोच्नै नसक्ने गरि एकासी ह्वात्तै घट्यो खाना पकाउने ग्यासको मुल्य ! (1240)
उडान बन्द गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा (1150)
गगन थापामाथि लाग्यो यस्तो गम्भीर आरोप, पक्राउ गर्ने तयारी ? (1128)
महान श्रीमान भनिएका बिनोद खड्काले पत्नि अनिता खड्कालाई धोका दिँदै अर्की महिलासँग गरे विबाह, बिनोदले अर्कैसँग विबाह गरेपछि हेर्नुहोस् के के भयो ? (989)
प्रेमिकालाई फकाउन लाखौं खर्च गरेर ‘लभ आइल्याण्ड’ नै बनाए, प्रेमिका त आइनन् तर पर्यटक आउन थाले